ရေနည်းရက်ချိန်း – PoemsCorner
ဖျတ်ကနဲ ရိုက်ခြွေလိုက်မယ် ဆိုတာကို
ငါ့ကို လူ.လောကထဲ စာရင်းသွင်းခဲ့တာကိုး။
သင်ဟာ ပုတီးတစ်ဖက် ဓားတစ်ဖက်နဲ.
အရာရာကို အလျားလိုက် ရိုက်ခတ်နေခဲ့တယ်
အိမ် ကို အ မြန် ပြန် ရ မယ်
အိမ် ကို အ မြန် ပြန် ရ မယ်။
ဟောဒီ မျက်ရည်တွေက စိမ့်ထွက်လာသလား
ငါ တိတ်တိတ် ငိုမိတယ်။
ဝေါကနဲ ပြိုဆင်းလာတဲ့ အနက်ထုထည်
ဆံပင်ဖြူတွေ ပြေလျ ရှုပ်ပွလို.
ကျွန်တော် ဖြီးပေးခွင့်ကော ရပါဦးမလား။
ပိန်လှီတဲ့ နှလုံးသားက ပေးခဲ့ပါ့လား။
ဆောင်းရော အမေရော ညနက်ခဲ့ပါပြီ
တွေဝေမှုနဲ. ထုံအနေတဲ့ ငါ့ခေါင်းမှာ
ဘာဆို ဘာမှ မရှိတော့ပါ့လား
စီးဝင်စရာ ဆေးရည်လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။
နောက်ကနေ အစ်မရယ် ကျွန်တော်ရယ်
သယ်စရာတွေကို ခြင်းနဲ.ထည်.လို. ။
အမေချစ်တဲ့ အိမ်ကိုရောက်ပြီ အမေ
ကျွန်တော်က အိမ်ထဲဝင် အိမ်ပြင်ထွက်နဲ.
ခြေရင်းမှာ အဖေနဲ.ကျွန်တော်က ငိုင်လို……
နောက်ဆုံးမှာ အစ်မက တိုးတိုးညည်းတယ်
“ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ အမေရယ် ”……..တဲ့။
ဖြစ်မှ……………… ဖြစ်ရလေ အမေရယ်
ကျွန်တော့်ကို ညကျ ဘယ်သူစောင်ထခြုံပေးမှာလဲ
မနက်ကျ ကျွန်တော့်အိပ်ယာ ဘယ်သူသိမ်းပေးမှာလဲ
အမေ တကယ်ပဲကျွန်တော့်ကို စိတ်ချလို.လား။
အမေ့ဘ၀ ပွန်းပဲ့ ပိန်ပါးခဲ့ရပါပြီ
အမေ ဟောဒီဘ၀မှာ အမေကချည်းပေးခဲ့တာပါ
ရောဂါတွေ ပူပန်မှုတွေ အဖိအစီးကို
“ အမေ ……….”လို. တိုးတိုးညည်းမိတယ်
အမေ့ရဲ. ဖိနပ်သံ မကြားရတော့ဘူး
“အမေ……မိုးလင်းပြီ အမေရဲ. ”
သိပ်အသည်းမာတယ် ဆိုတဲ့ အငယ်ကောင်လေး
သူက ဒီရောက်တုန်းသာ ငါ့ကိုချစ်တာဆိုတဲ့အမေ့သား
ဆံစတွေ ဖွာလို. ……..
ငါ့ရင်မှာ တဖွတရ တုန်ခါနေတယ်။
အားရပါးရ နေပစ်ချင်ပါသေးတယ်အမေ။ ။
(၄.၁၂.၂၀၀၂ တွင်ကွယ်လွန်သွားသော အမေသို.)
In: ကဗျာ Posted By: မော်နီ Date: May 24, 2010 All Time
မေ့လျော့နေသော အမေသို့ -နရီထက်
ကျွန်တော်ချစ်သော အမေ .. ( လူဆိုး )
Leave comment 39 Comments & 2,171 views
By: mawni at May 24, 2010
By: aunghmuekoko at May 24, 2010
မေမေ ဆေးရုံတက်တုန်က မေမေ့ကို စကားမပြောရဲဘူး.. ပြောလိုက်တဲ့ အသံမှာ ငိုသံပါရင် မေမေ စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့.. ပြီးတော့ ကဗျာထဲကလိုပဲ မေမေ ပြန်မထူးမှာစိုးလို့ …
ဘယ်သူတွေရဲ့ အမေတွေကိုမှမသေစေချင်ဘူး …
By: melodyphyO at May 24, 2010
တစ်ကယ်ပါဗျာ။ ဒါတစ်ကယ့် masterpiece ပါပဲ။ တစ်ကယ် ရင်ထဲထိ ရောက်တဲ့ ကဗျာပါ။
ကျွန်တော် ကဗျာမှာ space တွေပိုနေလို့ edit လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Editor’s Choice ထဲမှာပါထည့်ထားပါတယ်။
By: Thet Twe at May 24, 2010
By: အမရာ at May 24, 2010
ကျွန်တော် မနည်းကို စိတ်တင်းပြီး ဖတ်ရတဲ့ ကဗျာ တပုဒ်ပါပဲ။ ကဗျာဖတ်ပြီးပြီးချင်း ဆွံ့အ သွားသလို ခံစားရတယ်။ ဒီကဗျာကို အခုမှ ဖတ်မိလို့တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်တိုမိတယ်။ ကဗျာရေးသူ ကိုယ်တိုင် နောက်ထပ် ဘယ်သောအခါမှ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မရှိတော့မဲ့ အရေးအသားမျိုးပါပဲ။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
By: ChIr0N at May 25, 2010
By: happywin at Jun 3, 2010
By: kokozaw at Jun 3, 2010
ဘာပြောလို.ပြောမှန်းကို မသိတော့ပါဘူးဗျာ။ ဖတ်ရင်းနဲ. မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်ဗျာ။ လေးစားပါတယ် အကို
By: ထင်လင်း at Jun 6, 2010
By: MyoZaw at Jun 7, 2010
ကျွန်တော်နဲ.အမေ နေရာခြင်း ဝေးနေပါတယ်။အမေနေကောင်းကျန်းမာဆဲပါ။
……ဒီကဗျာကို လေးလေးမှန်မှန် ဖတ်နေရင်း…..
ဖတ်နေရင်း အလိုလို မျက်ရည်ကျလာတယ်။
By: nmz at Jun 8, 2010
သိပ်ကောင်းလွန်းလို့ နည်းနည်းစီ ခြွေဖတ်နေရတယ်
နည်းနည်းဖတ်လိုက် ငိုလိုက်နဲ့ ကြာတော့ ဘေးက လူကိုတောင် ရှက်လာတယ် 😛
အမေရှိရဲ့သားနဲ့ အမေ့ကို ဂရုမစိုက်ခဲ့တာတွေ ခုမှ နောင်တရမိတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါရှင် စာတလုံးဟာ လူပေါင်းမြောက်များစွာကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်
အမေ ရှိသေးတဲ့ သူတွေကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်
By: ei at Jun 9, 2010
ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုစဖတ်မိတာ
ကျွန်တော်ဒီကဗျာထက်ကောင်းတာကိုရှာလို့ တွေ့ နိုင်မယ်မထင်ဘူး
By: ကိုဇော် at Jun 9, 2010
ဖတ်ပြီးတဲ့ သူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်
comment လေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါ
By: အိလေး at Jun 12, 2010
ဒီဆိုဒ်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လမ်းညွှန်တယ်။ ကဗျာတွေ အစုံအလင်ဖတ်ချင်ရင် ဒီဆိုဒ်လေးကိုသွားတဲ့။
ဖွင့်တောင် ဖွင့်ပေးသွားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ပုဒ်တောင် မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်တဲ့။ အမေအကြောင်းကိုရေးထားတာတဲ့။ ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် မျက်ရည်ကျရတယ်တဲ့။ ညွှန်းလွန်းတော့လည်း လိုက်ရှာပြီး ဖတ်ရတာပေါ့။ Editor’s Choice ထဲမှာ ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ကဗျာနာမည်တွေကို ကြည့်ရင်း ဖတ်ပေမယ့် နှစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီး ငါရှာနေတဲ့ကဗျာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်ရက်မှာ နောက်တစ်ကြိမ်ဝင်ဖတ်ချိန်မှာ Comment အများဆုံးကဗျာဟာ အားလုံးကြိုက်တဲ့ ကဗျာဖြစ်ကောင်းပါရဲ့လို့ တွေးရင်း ဖတ်မိတယ်။ တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာဆရာရဲ့ Comment ကိုတော့ မကြိုက်ဘူးဗျာ။ ကွန်မန့်ကို မကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောရင် အားလုံးက ၀ိုင်းမုန်းဝိုင်းပြောတာကို မခံချင်ဘူး။ ကဗျာကို ပဲ ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို လေးစားပါတယ်။ တကယ်လည်း ရသမြောက်အောင်၊ အနုပညာမြောက်စွာရေးထားတဲ့ ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးခန်း၊ သားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်၊ ဒီဇာတ်ကွက်ကို ပေါ်အောင် ရေးထားတဲ့ အနုပညာကိုလေးစားကြောင်းပြောပါရစေ။
By: ပီတာ at Jun 20, 2010
ကျွန်တော် ဒီကဗျာလေးကို မြန်မာကျူးပစ် ဖိုရမ်မှာ တင်ပေးချင်လို့။
ကဗျာဆရာကို ခွင့်တောင်းပါတယ်။ ကိုမော်နီ့ နဲ့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို Credit ပေးထားပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီကဗျာကို တင်ထားတာကို မကြိုက်ရင်၊ ပြန်ဖျက်စေချင်ရင် ကွန်မန့်ပြန်ရေးပေးပါခင်ဗျာ။
ကဗျာဆရာရဲ့ အနုပညာနဲ့ ကဗျာရဲ့ ရသမြောက်အရေးအဖွဲ့ကို အားလုံးကို မျှဝေပေးချင်လို့ပါ။
ကိုပီတာ ခင်ဗျား …
ကဗျာဆရာရဲ့ comment ရေးဖြစ်ခဲ့တာက အကိုမသိသွားတဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ချို့ ဒီမှာဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ အကျဉ်း ပြောပြ ရမယ်ဆိုရင်တော့ user တစ်ယောက် (အခုတော့ banned လိုက်ပါပြီ) ကဗျာကောင်းတွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ comment တွေပေးပြီး လိုက်ဝေဖန်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကိုမောနီ ကဗျာရှည်တစ်ခုလဲ ပါပါတယ်။ ထိုကဗျာရှည်ကို ရှည်လွန်းတယ် ဒီထက်အများကြီး တိုလိုရသေးတယ်လို့ ဝေဖန်သွားသောကြောင့် member တွေနဲ့ သူနဲ့စကားများခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုမောနီက ရေးနည်းရက်ချိန်း ကဗျာတင်တဲ့အခါ အဲဒီ့ comment ကိုထားခဲ့တာပါ။ စာဖတ်သူတွေ အားလုံး ကို မရည်ရွယ်ပါ ။
By: admin at Jun 21, 2010
By: mawni at Jun 21, 2010
By: shann koe at Jun 22, 2010
By: anatyong at Jun 22, 2010
အမှန်တကယ်ကို မာစတာပိစ် ပါပဲဗျာ
By: မောင်နွေဦး at Jun 22, 2010
By: Nainggye at Jun 24, 2010
ကဗျာ ကတော့ တကယ် ပဲ မျက်ရည်စို့ပါတယ်
တကယ် လိုကခင်မင်စွာနဲ့ဝေဖန်ရင် စိတ်ဆိုးမလားတော့မသိဘူး
အစ် ကို ကဗျာနဲ့ မတူဘူး အစ်ကို ကဗျာကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါ
အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်မင်လို့ အကြံပေးတာပါ
ဖြစ်နိုင်ရင် စာပိုဒ် အဖြစ် ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ
ဒါ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရဲ့ အကြ့ပေးချက်ပါ စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ဘက်က
By: မြူမင်းသွင် at Jul 15, 2010
ဒါကြောင့် ပြောင်းပေးဖို.ကတော့ တောင်းပန်ပါတယ်
By: mawni at Jul 15, 2010
အိမ်လွမ်းမှာ ဖတ်ရကတည်းက မျက်ရည်မဆည်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ကဗျာလေးပါ….
ည ၂နာရီလောက်မှာ ဖတ်ရပြီး နောက်နေ့မနက်အစောကြီးမှာ မေမေ့ဆီဖုန်းဆက် ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာဆိုရင်လည်း ပိုမယ်မထင်ပါဘူး…
ဒီမှာတော့ ထပ်ပြီး မငိုပါရစေနဲ့တော့ ကိုမိုးညိုရေ….
မမာမာအောင် တင်းထားခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်အသဲလည်း…
By: မှုံရွှေရည် at Jul 15, 2010
ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ဖြစ်တာ ဒီတခါနဲ့ဆို သုံးခါမြောက်၊ ဘယ်တော့မှလဲ ရိုးအီသွားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တိုင်း ဖတ်ဖြစ်တဲ့ကဗျာလေးပါ။
ဒေါက်တာ့ရဲ့ ရင်နဲ့ရင်းပြီး ရေးထားတဲ့ကဗျာမို့လို့လား မသိဘူး ထိချက်က တကယ်ပြင်းပါတယ်။
ညီမလေး @ ပူးမူ
By: ညီမလေး at Jul 18, 2010
အရင်ကတော့ကဗျာရေးတတ်မယ်လို့မထင်မိဘူး။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲမြင်မိတယ်။ ဒီကဗျာကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဆရာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် မဂဇင်းတစ်ခုကို ပို့ချင်ပါတယ်။ ဆရာနဲ့ နီးနီးနေခဲ့ရတုန်းက ဒီလိုကဗျာ တွေကို ရေးတတ်မှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပါဆရာ။ ဆရာနာမည်မပြောင်းပါဘူး။ ဆရာခွင့်ပြုမယ်ဆို ရင် ကျွန်တော့်မေးလ်ကို ဆရာ မေးလ်တစ်ချက်ပို့ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ချိန်က တစ်ပည့်
By: ဝေထွန်း at Oct 13, 2010
By: ကိုမော်နှီ at Oct 16, 2010
ကိုမော်နီရေ … အခုမှဖတ်မိတဲ့ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် သတ်ပစ်ချင်မိပါတယ်ဗျာ ….
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကဗျာကို အခုမှ တွေ့ရသလားလို့ပေါ့
By: harry at May 21, 2011
အမေ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ဒီစာလူံးလေးကို ခလုတ်တိုက်တိုင်းဘ၀မှာအမိတခဲ့ရတယ်………..
By: May Kha at Feb 18, 2012
ကျွန်တော်… ဘာမှမပြောနိုင် …..ဘာမှမမြင်….. Screen ရှေ့မှာတင် အသက်ပျောက်ရတဲ့ကဗျာပါလားဗျာ..
ကဗျာဆရာရဲ့ အမေအကြောင်းကို မေ့ထားပြီး ကဗျာလေးကိုပြောချင်တယ်..
ပြည့်စုံလွန်းပါ တယ်ဗျာ……………. ဆေးကျောင်းမှာတင်မဟုတ်ဘဲ ဘယ်မှာရွတ်ရွတ် မျက်ရည်ကျလောက်ပါတယ်..
Master Piece ကဗျာဆိုတဲ့ အတိုင်း ပါဘဲ….. ကျန်တာဘာမှ မပြောခဲ့တော့ဘူး………..
By: နိုးဆက် နေ့ at Feb 10, 2013
By: ei lay at Feb 10, 2013
လုံးဝကို masterpiece ဖြစ်လွန်းပါတယ်..အရမ်းကိုလေးစားပါတယ်..ကိုမော်နီ..ဖတ်ဖူးသမျှ ကဗျာတွေထဲမှာ မျက်ရည်ဝဲမိတာ ဒီတခါပဲရှိသေးတယ်
By: ap at Mar 23, 2013
ကဗျာက ရှည်နေပေမယ့် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာတော့ တိုနေသလားလို့တောင်ခံစားမိပါတယ်
By: aung chan at Mar 23, 2013
သိပ်ကောင်းလွန်းတယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး..
By: sainobermaung at Mar 24, 2013
By: Aunty Lawyer at Mar 25, 2013
ဆရာရဲ့ ကဗျာကိုဖတ် ဖတ်ရင်း နဲ့ မျက်ရေတွေ အတားအဆီးမဲ့ ယိုစီးရတယ် ကျေဇူးတင်ပါတယ် အမေရဲ့ တန်ဖိုး နဲ့
ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် လမ်းပြပေးတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူး
By: myintzaw at Mar 25, 2013
ဒီကဗျာကိုဖတ်ပြီး ဆွံ့အနေမိတယ်။ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကဗျာတစ်ခါမှမဖတ်ဖူးသလို့ပဲ
By: မင်းထိုက် at Apr 4, 2013